Paper bag presents to our vendors for cleaner Yangon — Sa Ba Street Food Tours
Paper bag presents to our vendors for cleaner Yangon
During May Sa Ba Street Food Tours are supplying some of our vendors with paper bags as an alternative to the plastic bags they're currently using.
A lot of plastic waste comes from takeaway food containers so let's see how we can tackle this problem at the source and keep this beautiful city beautiful.
We welcome any suitable environmentally friendly solutions we can share with the vendors as alternatives to plastic bags. Plastic bags seem to be the cheapest and easiest way at present.
ယခုအပတ် မေလအတွင်း ကျွန်တော်တို့SaBa Street Food Tour ကုမ္ပဏီမှ လမ်းဘေးဈေးသည်များလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ပလပ်စတစ်အိပ်များအစား အခြားရွေးချယ်အသုံးပြုစရာတခုအဖြစ် စက္ကူအိပ်များ ကို အချို့သောလမ်းဘေးဈေးသည်များအား ပေးဝေထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည် !!
အစားအသောက်များကိုထုပ်ပိုးသောအရာအများစုမှာပလပ်စတစ်အိပ်များဖြစ်နေပါသည်!! ယခု စက္ကူအိပ်များပေးဝေခဲ့ပီးစတင်အသုံးပြုချိန်တွင် မည်သို့ မည်မျှ အကျိုးပြုနိုင်မည်ကိုစောင့်ကြည့်ပီး လက်ရှိသာယာလှပသောမြို့အား ပိုမိုသာယာလှပလာစေရန်ထိမ်းသိမ်းကြပါစို့ !!
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပီးသင့်တင့်လျောက်ပတ်မည့်အခြားဖြေရှင်းနည်းများကိုလည်း လမ်းဘေးဈေးသည်များအားဝေငှပညာပေးနိုင်ရန်အကြံပြုမှုများကိုကြိုဆိုပါသည်!! ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်တော့ပလပ်စတစ်အိပ်များကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပီးဈေးအပေါဆုံးဖြစ်နေဟန်တူပါသည်!!
Newer PostLotus Seeds now in Season in Yangon
Older PostRepresenting Yangon's street food at the Singapore Festival